कविता: के गर्नु ?
जनता नै भेडा भए पछि,
नेतालाई मात्रै दोष दिएर के गर्नु ?
सोचाई नै अविवेकी भए पछि,
युनिभर्सिटी र ठुला कलेज भएर के गर्नु ?
काम अधर्मको भए पछि,
रातो मछिन्द्रको रथ तानेर के गर्नु ?
सुरक्षाकर्मी नै असुरक्षित भए पछि,
सुशासन र न्यायको आशा के गर्नु ?
व्यहोरा हिंसात्मक भए पछि,
बुद्धको फोटो छातिमा टासेर के गर्नु ?
शुक्रबार, १९ भदौ, २०७७, बिहानको १०:२५ बजे